LibreOffice keessaa, galmeewwan kee fi maakroota lakqurxaawaan mallatteessuu ni dandeessa.
Galmee lakqurxaawaan mallatteessuuf, furtuu matayyaa si barbaachisa, ragaa. Furtuun matayyaa kompiitara keerra irratti akka walitti-qaba furtuu dhuunfaa, kan dhoksaatti qabamuu qabu fi furtuu uummataa kan yommuu isaan mallatteessitu galmeewwan keetti idaatu kuufama.
Galmicha ol kaa'iiti mallatteessi
Yommuu mallatoo lakqurxaawaa galmeetti fayyadamtu, akaakuun ida'a mirkaneessaa qabiyyee galmichaa irraa shallagama ida'uu furtuu matayyaa ke. Ida'a mirkaneessaa fi furtuun uummataake galmee waliin kuufamu.
Galmee mallattaa'e bani
Yommuu namni tokko galmicha kompuutara kamiyyuu kan LibreOffice dhiyoo fooyya'aa of irraa qabu irratti booda banu, sagantichi ida'a mirkaneessaa irra deebi'ee shallagee ida'aa mirkaneessaa kuufame waliin madaala. Yoo lamaanuu wal qixa tahan, sagantichi xabboocha , galmee hin jijjiiramne argitu asattoo godha. Dabalataan, sagantichi odeeffannoo furtuu uummataa ragicha irraa si argisiisuu danda'a.
Furtuu uummataa furtuu uummataa isa weebsaayitii abbooma ragaa irratti maxxanfame waliin madaaluu ni dandeessa.
Yommuu namni tokko waan tokko galmee keessaa jijjiiru, jijjiiramni kun mallatticha lakqurxaawaa cabsa. Jijjiiramicha booda, mallattoon kan galmicha xabboo argituu hin jiru.
Bu'aan mallattoo mirkaneessaa kabala haalojii fi qaaqa mallattoo lakqurxaawaa keessatti mul'ata. Galmee fi mallattoon maayikiroo baay'een galmee ODF keessatti argamuu danda'u. Yoo mallatticha waliin rakkoon jiraate, mirkaneessi bu'aa mallattoo sana mallattoo hundaaf tilmaamama. Innis, yoo mallattoo gataa'aa kudhan fi mallattoo fashalaa tokko ta'an, kabala haalojii fi kabala dirree qaaqa keessatti alabaa dhaabii akka fashalaa'u godha.
Sajoo armaan gadii fi ergaa yeroo bantu galmee mallatteeffamee barbaadde kamiyyuu ilaaluu ni dandeessa.
Sajoo Kabala haalojii keessaa
Mallattoon gataa'aa dha.
Mallattoon TOlE, garuu ragaan gataa'aa ta'uu hin dandeenye.
Mallattoo fi ragaan TOLE, garuu qaamni galmee hundi hin mallattoofne. (Galmee OpenOffice.org duraanaa hanga 3.2 yookan StarOffice duraanaa hanga 9.2, hubachiisa gadii ilaali.)
Mallattoon fashaalaa'a dha.
Mallattoo fi Masoojjii fooyya'aa
Mallateessi qabiyyee jijjiirama OpenOffice.org 3.2 fi StarOffice 9.2 waliin godhate. Amma qabiyyeen faayilii hundinuu, faayilii mallateefame malee(META-INF/documentsignatures.xml) mataasaanii mallateefamaniiru.
Yommuu galmee mallattaa'e fudhattu, fi gabaasotni mosaajjii kan mallattichi gataa'aa, kuni gonkumaan hanqii galmichi kan ergaan erge waliin walfakkatu ta'uu danda'u jechuu miti. Galmeewwan ragaalee mosaajjii tiin mallateessuun tooftaa hayyisa gonkaan miti. Amaloota nageenyaa marsuuf karaalee hedduutiin ni danda'ama.
Sajoocha hin amaniin. Ragaalee qoriiti mirkaneessi.
Gataa'insi mallatoo ashuura goolabbii seeraanii akaakuu kamiiyyuu miti.
Sirnoota dalagaa foddaawwanii irratti, mallattoowwan gataa'insuun amalootni foddaawwanii faayidaa irra oola. Sirnoota solaariisii fi linuuksii irratti, faayilootni kanneen Thunderbird, Mozilla yookiin Firefox tiin dhiyaatan faayidaa irra oolu. Faayilootni kanneen sirna ke keessatti faayidaa irra oolan dhuguma faayiloota xabboo kanneen oomishtoota xabboodhaan dhiyaatan ta'uu isaanii mirkaneeffachuu qabda.malevolent intruders tiif, karaaleen ittiin faayiloota xobbuu faayiloota kanneen biroo isaan dhiyeessaniin bakka buusaman hedduun ni jiru.
Ergaan waa'ee gataa'insa mallattoo kan ati LibreOffice keessatti isaan argitu ergaawwan kanneen deebii faayiloota gataa'insati. Mosajjiin LibreOffice karaa ittiin ergaawwan haalata dhugaa ragaa kamiyyuu calaqqisisuu isaanii mirkaneeffatu hin jiru. Mosajjiin LibreOffice ergaawwan kanneen faayiloota biroo kanneen to'annaa gabaasa LibreOffice jala hin jirre qofa agarsiisa. Dirqamni seeraa LibreOffice kan ergaawwan agarsiifaman haalata dhugaa mallatoo lakqurxaawaa calaqqisisu hin jiru.
HTTPS irra WebDAV fayyadamuun galmee banuu
Title is: Waa'ee Mallattoowwan Lakqurxaawaa